सबै भन्दा साधारण खाद्य पदार्थ पैदा एलर्जी, गाई गरेको दूध अनुसार, यो बच्चाहरु को 80% भन्दा छोड्न सक्दैनौं। सुत्केरी आमा यो प्रयोग भने, एक शिशु स्तन दूध मा पनि एलर्जी दाना उत्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ।
तर यो बच्चा पछि डेयरी उत्पादन सहनु छैन भन्ने होइन। हामी सम्म यो उत्पादन को प्रक्रिया को लागि आवश्यक इन्जाइमहरु गठन हुनेछ प्रतीक्षा छ। उमेर दुई वर्ष पछि, तपाईं इन्जाइमहरु प्रक्रिया खाना लागि तयार हुँदा केही खाद्य पदार्थ, को परिचय संग हतार छैन भने, तपाईंले एलर्जी को विकास जोगिन सक्छौं।
सबैभन्दा सामान्यतः निरन्तर allergenic खाद्य पदार्थ, गाई गरेको दूध, यो बाहेक - दूध मिश्रण, पनीर, गहुँ, तिल, कालो मरिच र विदेशी फल। धेरै ध्यान दिएर यस्तो अन्डा, माछा, रातो तरकारी, मेवा, मह र सिट्रस रूपमा शिशु आहार रूपमा पूरक आहार को परिचय भेट्नुपर्छ गर्न।
1 वर्ष अघि एलर्जी, सामन, कावीयार, समुद्री भोजन झुकाउ भएका केटाकेटीलाई छैन दिनुपर्छ। मासु मा यस्तो प्रतिक्रिया जोगिन, यसलाई चिकन मासु छाला हटाउन र पानी मा भिजेको गर्न आवश्यक छ संग, स्थिर र त्यसपछि thawed हुनुपर्छ, मासु एक वर्ष सम्म दिनुपर्छ। तर बाछाको मासु, पोर्क र टर्की को मासु सजिलै सहन छ।
तपाईं उपाय बिना आफ्नो बच्चा फल वा तरकारी दिन भने, तिनीहरूलाई कुनै पनि बच्चाहरु को लागि रूपमा allergenic खाद्य पदार्थ कार्य गर्नेछ। एक बच्चा फल एक प्लेट खान जाँदै छ भने, हरियो मटर वा केही आडू एक कप, त्यसपछि यसलाई दाना, पहिले यी उत्पादनहरु को एक महान सहिष्णुता थियो हुनत देखा पर्न सक्छन्। चकलेट कैंडी, जेली, कर्मेल, पनि सानो परिमाणमा अक्सर एलर्जी कारण।
जवान छोराछोरीको, खतरनाक उत्पादनहरु अक्सर एलर्जी को क्रस-संस्करण, बच्चालाई एक समयमा डेयरी उत्पादन र सोया प्रोटिन सहनु सक्छ जब प्रदान, को अन्डा र चिकन, र ग्लुटनमुक्त आलु स्टार्च। यस मामला मा, आफ्नो खाना धेरै गाह्रो छ टिपेर।
यो यस्तो प्रतिक्रिया रस, आइसक्रिम, पेय पदार्थ, yoghurts थपिएका छन् कि मात्र allergen उत्पादन, तर पनि खाना fillers, colorings, flavorings र परिरक्षकों छैनन् भनेर सम्झना गर्न महत्त्वपूर्ण छ। आखिर, तिनीहरू अक्सर आमाहरू रूपमा स्वादिष्ट, तर धेरै उपयोगी खाना दिन्छ।
स्वास्थ्य समस्या, बच्चा जोगिन, expectant आमा बारेमा विचार गर्नुपर्छ hypoallergenic आहार गर्भावस्था को दोस्रो आधा लागि।
पागल, मह, गाढा दूध - स्तन-रुचाउने समयमा सबैभन्दा allergenic खाद्य पदार्थ।
सुत्केरी आमाले प्रति दिन कुनै2भन्दा बढी पागल, प्राथमिकताको खान सक्नुहुन्छ अखरोट वा अखरोट, बदाम, तर साधारण बचा गर्नुपर्छ। तर हामी अखरोट र बादाम bowels ढीले भने, ओखर यो secures कि सम्झना गर्नुपर्छ।
दुई वर्ष भन्दा पुरानो बच्चाहरु, तपाईं सानो परिमाणमा पागल खान सक्छ। विशेष गरी उपयोगी यो कम जन्म तौल संग बच्चाहरु लागि हो। यस्तो फलाम, जस्ता, आयोडिन वा बादाम, भिटामिन डी, क्याल्सियम र fluoride जसमा ओखर, रूपमा rickets र रक्तअल्पता, मा पागल सहयोग। सबैभन्दा उपयोगी र कम allergenic छन् पाइन नट, गर्भवती र lactating महिला र केटाकेटीलाई बल र ऊर्जा दिन जो।
तर झिंगा, केकडा मासु, बदाम, पिस्ता बिल्कुल unprofitable जस्तै यस्तो allergenic खाद्य पदार्थ। यो एक धेरै भारी खाना छ, र केकडा मासु नै रंजक र सुगंध थपिएको थियो।
सिट्रस फल बच्चालाई खुवाउन वा 1.5 वर्ष पछि गर्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा सबै सिट्रस को उपयोगी अंगुर दाख र कागति विचार गर्नुहोस्। र यो चूसने कागति घटेको कसरी दिन र पकाएको खाना यो फल को रस थप्न, सम्भव छ।
allergenic गर्न खाद्य पदार्थ शिशुहरू रोग zucchini को लालच साथ सुरु गर्नुपर्छ कारण छैन, बन्दागोभी, धेरै आलु र गाजर दिइएको सीमित।
पछि, डेयरी उत्पादन प्रविष्ट गर्न, बिस्कुट र सुकाउने लोभ्याउन सुरु गर्नुपर्छ। बोतल-खुवाउनुभयो जो शिशु, यो यस्तो Nutrilak पेप्टाइड (हा), nanga, नेन-भटमास, alfar रूपमा hypoallergenic चिकित्सा मिश्रण प्रयोग गर्न आवश्यक छ।
तपाईं मनसायलाई निगरानी भने शिशु गरेको आहार, यो उमेर संग सामान्य मा एलर्जी रोगहरु को विकास जोगिन सम्भव छ।
बच्चा को वृद्धि कसरी वृद्धि गर्न? उचाइ, तौल, उमेर: तालिका
जब नवजात मा आँसु छन्? मान्यता र विचलन
बच्चाहरु बारेमा अचम्मको तथ्य, तपाईं डाक्टर सुन्न छैन
एक क्रलर के हो? क्रलर उपकरण "Yandex" र Google
र बेफाइदा: स्वीडेन जीवन
अस्पताल Yangantau, Bashkortostan। उपचार को समीक्षा
दर्जा मास्को ट्याक्सी: ग्राहक समीक्षा
सोनी एरिक्सन Xperia नव: कल्पना, समीक्षा, निर्देशन, समीक्षा, फोटो